Iyo Apple Watch yaizosvika 27 mamirioni mayuniti akatengeswa muna 2018 | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch yaizosvika mamirioni makumi maviri neshanu amayuniti akatengeswa muna 27
Iyi Kisimusi zvinoita sekunge vari kuita zvakanaka kusvika pakutengeswa kweApple zvigadzirwa, asi kana paine zvigadzirwa zviviri zvatinogona kuratidza, ndeizvi: AirPods uye Apple Watch. Vanhu vanoda Apple zvigadzirwa izvo "zvinodhura" uye zvakavimbika, chimwe chinhu chatinogona kuwana chaizvo muAirPods uye Apple Watch smartwatch.
Zvine musoro kana tichiti "zvakachipa" tinozvimisikidza mumakotesheni nekuti hazvisi chaizvo kuti zvakachipa, ndezvekuti ndizvo zvigadzirwa zvinodhura zvakanyanya maererano nemutengo une Apple mune yayo chigadzirwa katarogu. Iye zvino zvakare ne kusvika kweiyo nyowani Apple Watch Series 3, kune vazhinji vashandisi vanovhurwa kuti vatenge ivo kuti vavape kana ivo vanoronga kuitenga gore rinouya.
Vanopfuura mamirioni makumi maviri nemashanu Apple Watch muna 25
Izvi zvinoita kuti iyo Apple Watch iwane pfuura chipingamupinyi chemamirioni makumi maviri neshanu dzewatch dzinotengeswa muna 25. Ichokwadi ndechekuti wachi yeApple yakagadzika zvakakwana nekufamba kwenguva uye zvishoma nezvishoma iri kuwedzera zvigadziriso zvinoita kuti vanhu vazhinji vafunge nezve kutenga chishongedzo.
Huwandu hwezvinhu zviripo, tambo, majaja, vadziviriri uye zvimwe zvigadzirwa zvinogadzira izvi zvakare mukwanisi wakakwana wevatengi vazhinji. Kune chikamu chayo, zviri pachena inowedzera sarudzo dzinonakidza dzevatambi, kuramba mvura uye zvimwe zvigadzirwa zve software zvinoita kuti chive chinhu chinonakidza kwazvo chikamu chakakura kwazvo pamusika. Kunyangwe iyo Apple Watch yakazosvika kuzvitoro nguva yapfuura kupfuura zvimwe zvigadzirwa zvemaoko, mukwikwidzi "ngazvikundwe" uye izvozvi Apple Watch iri munzira yekutengesa kunze kwese kusanganisira vamwe vevatungamiriri vechinyakare vatungamiriri venyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch yaizosvika mamirioni makumi maviri neshanu amayuniti akatengeswa muna 27
Ndine apple wachi yakateedzana 2, iyo yandinoshandisa kupfuura zvandaifunga, uye ndiri kumirira kuita shanduko kusvika katatu kuitira kuti muSpain igone kushandiswa senhare, ikozvino ndinoishandisa kanopfuura kamwe senge isina maoko. , asi ini ndingafarire kuve neine 3G yekubatana kana ini ndichifamba imbwa, kana kuenda pasi kumahombekombe ... ndosiya iphone kumba ... uye ndototenga modhi ine hombe kana inorema skrini senge X ...
John Bruno, kusaina kutsva kweGoogle kweinjiniya weApple
Óscar Rodríguez, anosiya chinzvimbo cheManeja Wenyika kuApple Spain